Hoy > HAWLAHA
UNSOS waxaa ay si joogto ah taageero dhanka saadka ah siisaa AMISOM, UNSOM iyo Ciidamadda Qaranka Soomaaliyeed.
Hawlgalkan ayaa waxaa uu AMISOM ka taageeri doonaa bixinta raaashinka, shidaalka, biyaha, hooyga iyo kaabayaasha, adeegyada dayactirka ah oo ay qeyb ka yihiin qalabka sida gaarka ah ay uu leeyihiin hay’addaha ay bah wadaagta yihiin iyo kuwa ay deeq ahaanba uu bixiyeen ay sida wadajirka ah uu aqoonsan yihiin oo ayna uu baahan yihiin Midowga Afrika, Qaramada Midoobay iyo Waddamada Ay Ciidamaddooda Qeybta Ka Yihiin Hawlgalka AMISOM.
Hawlgalkan ayaa waxaa uu UNSOM ka taageeri doonaa adeegyo kala duwan oo ay kamid tahay xoojinta joogitaanka UNSOM ee caasimadaha maamulada ku meel gaarka ah ee ka dhisan gobollada kala duwan.
Hawlgalkan ayaa waxaa uu hay’addaha ammaanka ee federaaliga ah ee waddanka Soomaaliya uu ka tageeri doonaa waxyaabaha asaasiga ah ee lagama maarmanka ah ee diiradda lagu saarayo xirmooyin lagu taageraayo looguna tallagalay 10,900 oo ah ciidamo katirsan ciidanka xoogga Soomaaliyeed ee hawlgallada wadajirka ah kala qeyb qaato AMISOM.
Anshaxa iyo Asluubta 
Xarumaha iyo Injineernimada 
Tiknoolajiyada macluumaadka iyo isgaarsiinta 
Baabuurta iyo qalabka kale 
MOVCON and Troop Rotations 
Taageerrada Hay’adaha Amniga ee Dowladda Federaalka ah 
Taageerada ay maalgeliso sanduuqa maalgelinta ee AMISOM
Sanduuqa maalgelinta ee AMISOM oo si iskood ah waddamada xubnaha ka ah AMISOM ay ugu tabarucaan ee Trust Fund ayaa uu suuragelinayaa AMISOM in ay sare uu qaado taageerada joogtada ah ee ay bixiso UNSOS.
Qalabka ammaanka iyo nabadgelyada 
Xamuulka iyo Safrinta 
Dhisida kartida iyo mashaaricda wacyigelinta ah 
Source URL: https://unsos.unmissions.org/so/hawlaha